NO NGO FOR SOMALIA | News From Somalia
Category Archives: NO NGO FOR SOMALIA
DHAGEYSO:-Amiirka Mujaahidiinta Alshabaab oo la hadlay Somali meel walba ay joogto kana warbixiyay Shirka London Mujaahidiintana ugu baaqay inay gilgilaan xarumaha cadowga.
Posted on May 5, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Sheekh Muqtaar Cabdiraxmaan Abuu Zubayr Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa ugu horeyn utahniyeeyay Mujaahidiinta muddo saacado ah la wareegay gacan ku hayntii xarunta Maxkamada Gobalka Banaadir isagoo allaah ugu baryay in darajadooda uu koryeelo, shahaadadoodana ka aqbalo.
“Waa dhiiga shuhadada waxa fashiliyay duulaankii Mareykanku dalkeena ku soo qaaday,waa dhiiga shuhadada waxa Itoobiya u diiday inay qabsadaan dalkeena,waa dhiiga shuhadada waxa dumiyay shirqooladii gaallo raacyada ay kamid ahaayeen Cabduulaahi Yuusuf iyo Shariif Murtad,waa dhiiga shuhadada waxa burburin doona dabinnada Yugaandhayska iyo dabadhilifyadooda”ayuu Yiri Amiirka xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abuu Zubayr.
Amiirka Shabaabul Mujaahidiin ayaa intaasi ka dib fariintiisa is dul istaag ku sameeyay laba arimood oo kala ah dhibaatooyinka Nidaamka Dowladda Xasan Sheekh ugaystay umadda Muslimka Soomaaliyeed iyo shirka ka dhacaya Dalka Britain.
“Waxay soo waarideen destuur ka dhan ah umadda Diinteeda,dhaqankeeda iyo danaheedaba la guna saleeyay rabitaanka dad shisheeya ah oo diin iyo dhaqan midna wadaagin,kitaabkii allana waa la tuuray”ayuu hadalkiisa raaciyay Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abuu Zubayr.
HALKAN KALA DAG KALIMADA ABUU ZUBAYR AMA KU DHAGAYSO FLASH PLAYER
Abuu Zubayr oo looga bartay in fariimaha uu ku soo qaato gabayo ka hadlaya arimaha uu ugud binayo shacabka Soomaaliyeed ayaa yiri.
Ma lahase Diintu waxay tahay dadku waannu garaninee.
Dibnaha ka ashahaadiye ma aha dabarka goosee.
Horta diintu waa dhaqan,destuur iyo axkaamba leh
Dowladoo Cadaalada ,maadada daliilo leh
Dagsan oo la kala qoray.
Aadniga Dantiisuye ilaahay udoorbiday.
Ninka daayacee Nacay.
Mid Ibliis udaabacay desutur kale ka yeeshee hawadiisa door bida.
Nin dafiray quraankii bal inuu ka duwanyahay iyo inuu ka daranyahay.
Danbigiisu waxa uu yahay diintee ku taalaa dunna la guma dhaafine miyaa si hoosba loo dayay.
Arinta Labaad ee Dowladdu ku dhaqaaqday ayuu Sheekh Mutaar Abuu Subeyr ku sheegay inay Jideeyeen oo ay gabood u noqdeen qabsashada Dalka iyo kala qeybintiisa iyagoo ku magacaabay Ciidamada gumaystaha soo duulay inay yihiin ciidamo nabad ilaalin.
Sheekh Muqtaar Abuu Zubayr ayaa sheegay in ficilka Dowladdu ku qaabishay Shisheeyaha soo duulay ay keentay in Ciidamo ajaaniib ah qabsadaan Magaalooyin ka tirsan koonfurta Soomaaliya islamarkaana iyagii gaboodka u ahaa aanan wax tallo ah looga ogolayn.
Amiirka Mujaahidiinta Alshabaab ayaa carabka ku dhuftay in ilihii dhaqaalaha gaallo utaliyaan,boobna lagu hayo khayraadkii dalka, iyagoo qalqal galiyay dhaqaalihii gudaha islamarkaana horseeday Sicir barar iyo qalalaaso sarif.
“Waxay horseedeen faafinta anshax xumada iyo duminta Aqlaaqda,amniga ay sugayaan iyo nabada ay wadaana waxay ku soo uruurtay in ciidamo shisheeye ku hogaamiyaan deegaamo aamin ah oo sharciga alle hoos harsanaya dadkana ay ka dhigaan wax barakaca wax la laayo wax la xerxiro iyo wax cabsada”ayuu yiri Sheekh Muqtaar Abuu Zubayr.
Amiirka Mujaahidiinta Soomaaliya Sheekh Muqtaar ayaa sheegay in xabsi wadareedyo aan kala sooc la hayn si joogto kaga dhacaan Muqdisho,Kismaayo iyo Baydhabo isla markaana dadka madax furasho lagu daayo halka kuwa kalana xabsiyada in la gala baxo maydkooda jidadka la soo dhiga.
“Arimaahasi aan sheegnay waa tan keentay Mareykanka in Ictiraaf iyo soo dhaweyn ku qaabilo Madaxda ridada maxaa yeelay waxay uxaqiijiyeen ujeedooyinkii ay rabeen”ayuu hadalkiisa kusii dhidbay Sheekh Mukhtaar Abuu Subayr.
Amiirka Mujaahidiinta Alshabaab oo hadlayay qadar 10 daqiiqo ah ayaa sheegay in Nidaamka ridada fashilkiisu uu soo shaac baxay , wadiiqadii burburkana cagta saaray.
Waqtigii danaystuhu dhammaa,waana dhacayaanee.
Rag dhalaashadoo ciil qabaa dhuunta kala goynee.
Dhiig miirada waa la leyn , dhuuni raaca ah.
Dhagtaa dhiiga loo darri raggaa dhaafay samihiiyee.
Inshaa allaahu waa lagu dhugtami subaxaan dheereyn.
Sheekh Muqtaar Cabdiraxmaan Abuu Zubayr ayaa kalimadiisa sidoo kale kaga hadlay Shirka London ee dhacay Todoba Bishaan May.
Sheekha ayaa sheegay in sadex qodob saldhig u yihiin shirka London ee marti galinayso Dowladda Ingariiska.
1-ayuu ku sheegay in la gula wareegayo ilaha dhaqaalaha iyo qeyraadka dalka wixii ka haray.
2– kala qeybinta dalka iyadoo lagu wajahayo waxa loogu yeeray Federaal.
3.in xukunka Allaah laga tago oo lagu bedasho xeerarka Ingariiska iyo Mareykanka.
“Ogsoonaada in dalka la qabsaday lana qaybsaday ,waxa idiin haystaa waa Itoobiya,Kenya iyo Uganda,dadka la adeegsananaya waa dad muuqa iyo magaca idinla wadaaga laakin Fekerka iyo Anshaxa la wadaaga gaalada soo duushay.
Ugu danbeyntii Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa ugu baaqay shacabka inaysan ku kadsoomin balanqaadyada gaalada iyo gaala raacyada.
KISMAAYO IYO KENYA:-Xasan Gurguurte oo Kenya ugu yeertay inow aqbalo Maamulka Kenya ku dhiseyso Kismaayo.
Xasan sheekh Culusoow ayaa looga yeeray Dalka Kenya isagoo maantana gaaray Mombasa dalka kenya.
Xasan Culusoow ayaa gaaray Magaalada Mombasa oo uu kula kulmay Uhuru Kenyata,waxaana safarka ugu weynaa arinka Kismaayo oo meel xun maraya, welina la isku af garan waayay in maamul loo sameeyo,halisna ugu jira in dagaal beeleed ka qarxo.
Axmed Madoobe ayaa isna ka dhoofay Kismaayo si uu ugu biiro wada hadalka Xasan Culusoow ugu yeertay Kenya.
lama oga sida uu u hirgalayo danaha Kenya ay ka leedahay Jubbooyinka iyadoo geed dheer iyo mid gaabanba u koreysa gumaysiga dhaqaale oo ay la damacsantahay Gobalada Jubbooyinka.
Waxaa qarash badan ku bixinaya in Kismaayo loo helo maamul gaar ah dowlada Norway oo dhawaan ka howl gali doonta qeybo ka mid badaha koofureed ee Somalia, walow ay hor yaalaan caqabado adag oo lama gudbaan iyo dagaalo aan dhamaad lahayn oo weli ka jira gayiga Somaliyeed.
Kenya ayaa wakiil ka ah kuwa iska leh dagaalada ka socda gayiga Somaliyeed,kuwaas oo ciidankeeda ku biila magaalada Kismaayo iyo Afmadow oo ka jogaan Jubooyinka,waxaana ka socda dagaalo,waxaana la sugayaa inay ka qarxaan dagaal beeleedyo ay caan ku yihiin ku howsha horboodaya.
Turkida oo ka guuraya Moqdisho ka dib markii dhiigoodo gaaray dhulka Somaliyeed.
Posted on April 17, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Waxaa guuraya Turkidii soo gaaray Moqdisho,cabsi iyo amaan xumo ka jirta magaalada Moqdisho awgeed ayay isagu tageen meelo cayiman.
Turkida ayaa og ama hada ogaaday in moqdisho tahay magaalo dagaalo ka jiraan la iskuna haysto,qeybna ay ka yihiin dagaalkaas ka socda Moqdisho,shiishkuna saaran yahay, maxaa yeelay maalmo ka hor ayaa lagu qarxiyay Moqdisho kuna waayeen dhowr ka tirsan shaqalahooda.
Waxaa iska arkay ganacsatada iyo dadka danyarta ah oo ku nool Moqdisho waana meesha colaado uga bilaabatay,waxaana inta badan la shaqeeya NGO-yada Maxaliga ee Moqdisho ka howlgala waana meesha dhibku uga bilowday.
Turkiga ayaa Moqdisho ku yimid Mucaawino iyo mashaariic qarsoon,laakin maalmahan danbe la arkayay wajigiisa runta ah.
MAQAAL XAQIIQ SHEEG AH:-SOOMAALIYA IYO ’SYKES- PICOTKA’ CUSUB. Qore:- Suldaan Maxamed Garyare.
Posted on April 13, 2013 by Voice Of Somalia Standard
وبعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
SOOMAALIYA IYO ’SYKES- PICOTKA’ CUSUB
Allaah baa mahad leh. Ammaan iyo nabadgelyo Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato!
Suxufiga caanka ah ee wax ku qora shaashadda caalamiga ah ee Al-Jazeera, lana yiraahdo Xamdi Cabduraxmaan ayaa dhawaan daabacay qoraal dheer oo uu ugu magac darey Soomaaliya iyo ’Sykes-Picotka cusub’. Taariikhahaan hawraarta ama kelmadda Sykes-Picot, waxa ay ka timi heshiis dhexmarey Ingiriiska iyo Faransiiskaintii uu socday waxa reer Galbeedku ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee adduunka, ee lagaga soo horjeeday dowladdii Islaamiga ahayd ee Cismaaniyiintii iyo Jarmalka oo gacansaar la lahaa.
Waxa dhacday in labadan dal ee aan soo xusay ay heshiis qarsoodi ah la galeen Mashaa’ikhdii Carabta horjoogaha u ahayd iyaga oo ka dhadhaadhicinaya in ay gooni isu taagaan, kana hoos baxaan maamulka Kahallifada Cismaaniyiinta, si ay suurtagal u noqoto in danaha labadan dal uu u hirgalo.
Heshiiskaa waxa laga qarsanayey oo la diiddanaa in uu qayb ka noqdo dalka Ruushka oo isna ahaa awood soo baxaysa oo markaa Yurub ka jirtay. Hishiiskaan waxaa Mashaa’ikhdaa la saxiixday Wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska, lana oran jirey Sir Mark Sykes iyo kii Faransiiska oo isna la oran jirey Farncois Georges-Picot.
Ingiriiska waxaa loo oggolaaday in uu muraaqabo ama ilaalin ku sameeyo, inta u dhexeysaWabiga Urdun, koonfurta Ciraaq iyo meelo yar-yar oo ay ku jiraan magaalada dekedda ah ee Xayfa iyo Cagra, oo ay Yuhuuddu dhulboobka ku qabsatay 1940kii. Ingiriisku qorshahaa wuxuu uga danlahaa in uu marwalba la socdo wixii dhaqdhaqaaq ah ee ka jira badda Midetereniyanka. Meesha Faransiiskana loo qoondeeyey in uu isna sooryo u qaato, Koonfurta Bari ee Turkiga, Waqooyiga Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan, meesha Ruushka lagu sasabay in uu isna galo Istambuul.
Qoraagu howraartiisa wuxuu ku bilaabay; shaki kuma jiro in dawladaha ka taliya dalalka Carabtu ay dhumiyeen dhul baaxad weyn oo Islaamku wujuud ku lahaa, kadib markii ay ku mashquuleen, qalcadihii dhaadheeraa iyo jidadkii waaweynaa ee reer Galbeedku ugu beddelay khayraadkii dalalkooda. Waxayna meesha soo dhigtay in dowlado fakhri ah ay la wareegaan dhul badan oo lagu tirin jirey dalalka Carabta, dhulkaa waxaa ka mid ahSoomaaliya, oo aad mooddo in laba dal oo gacanta u hoorsada madaxda Carabtu uu u gacan galay iyaga oo qol ku xirtay kuwa ku magacaaban dowlad ku sheegga Soomaalida.
Qoraagu wuxuu tilmaamay dalalkaas, isaga oo ku sheegay Itoobiya iyo Kenya, wuxuuna carrabaabay in ay heshiish qarsoodi ah lagaleen nimanka ugu sarreeya dowlad ku sheegga Soomaalida, lana gaarey is afgarad aan sharciyad iyo qoraal taam ah midna lahayn lana yiraahdo ”Memorandum of understanding”. Isfahamkaani wuxuu dhigayaa in dhulka Soomaalida wixii khayraad ah ee ku jira ay heshiis ku yihiin saddexdan qaybood oo midi tahay tan loo heshiiyey kheyaraadkeeda, waa Soomaaliyee, laakiin labada kale ay yihiin kuwo koobkooda wata oo qaadanaya wax aysan iyagu lahayn oo cid kale leedahay.
Heshiiskan ujeedooyin badan baa ka dambeeya oo ku salaysan xagga siyaasadda dhulka(Geo-politics), waxaana kamid ah in ay meesha laga saaro hammigii ahaa in dhulka Soomaalidu yahay dhul kamid ah dhulalka Carabta, waxaana dhibaatada uga badani la soo dersaysaa ayaa qoraagu sii raacshay dalka Suudaan oo isagu ah dal Muslim ah haddana Carab ah.
Tuhunka arrintani wuxuu soo baxay markii ay Qol mugdi ah oo albaabadu u laaban yihiin ay wada galeen saddexda qolo oo aan soo xusay, iyada oo laga qariyey dalalkii kale ee xubnaha ka ahaa waxaa loogu yeero IGAD oo ay ku midaysanyihiin dalal dhowr ah oo Suudaani ka mid tahay. Kulankaa qarsoodiga ahna waxa loogu magacdarey; Nabad ku soo dabbaalidda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ”Stability Plan great for Southern and central Somalia, wuxuuna dhacay 6dii December 2012kii.
Waxaa shirkaa gardaadinayey u qaybsanaha xagga arrimaha nabad ku soo dabbaalidda Soomaaliya ee IGAD, ahna wasiirka Arrimaha dibadda dalka Kenya Kiroto Arap Kirwa,wuxuuna howlwadeen ka yahay xafiis ka madaxbannaan IGAD, xaruntiisuna tahay magaalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya.
Waxaana dhacday in la yareystay dalalkii kale ee IGAD kamid ahaa, taas oo u ’eg in arrimahani ay yihiin arrimo u gaara Itoobiya iyo Kenya. Haddii ay dhacday in IGAD dhexdeedu ay u kala dhuumanayso arrimaha Soomaaliya, miyaan la oran karin isfahamkani wuxuu la mid yahay kii ay goonnida ula gaareen Sykes-Picot mashaa’ikhdii Carabta ee aan waxba kala ogeyn, qarni ka hor.
Qoraagu wuxuu muujinayaa dareen ah in Itoobiya iyo Kenya ay helayaan sharciyad u oggolaanaysa in markii ay doonaan faragelin ku sameyn karaan siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, taas oo ka dhigan in uusan jirin wax ka xannibaya in ciidamadoodu hor iyo gadaal isu daba maraan iyaga oo aan u baahneyn oggolaansho caalami ah.
Heshiishkani wuxuu daba socdaa kadib markii Madaxa Wasiiradda ee cusub ee dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn uu bishii November ee kal hore booqasho ku tagay dalka Kenya, isaga oo Kenya ka dalbaya ama u sheegaya in ay Kenya tahay saaxiib weyn oo ay Itoobiya leedahay, lagama maarmaana u ah iska kaashiga arrimaha Soomaaliya.
Qorshaha ay ku talagaleen ayaa ah in ay faragelin joogta ah ku samaynayaan saddex qaybood oo Soomaaliya kamid ah.
Deegaanka Koonfurta Soomaaliya, ayna kutaal magaalada dekedda ah ee Kismaayo, waxaa isfahamku dhigayaa in ciidammadda Kenya ay ka samaystaan waxaa loo yaqaan Buffer Zone, taas oo u dhigma kan Yuhuuddu ka samaysatay Koonfurta Lubnaan iyo Buuraha Golan-Height, si mar walba ay Kenya gacan ugu yeelato siyaasadda Soomaaliya.
Gobolladda dhexe, oo ay Hiiraan kamid tahay, Itoobiya waxay ka ankumaysaa maamul goboleed iyada ka shidaal qaata si mar walba ay Itoobiya majaraha ugu hayso qaybo kamid ah siyaasadda Soomaaliya, taas oo meesha ka saareysa in dowlad xor oo Soomaalidu leedahay ay meesha timaaddo.
Deegaanka saddexaad oo ay ku jirto Caasimaddii dalka, Muqdisho, waxa iyana hoggankiisa lagu wareejiyey ciidammadda nabad ilaalinta ee loo yaqaan AMISOM, kuwaas oo daamanka u haya Itoobiya iyo Kenya in aan waxyeello looga gaysan.
Qoraaga oo ah Nin ay hadaladiisa ka dhadhamayso waddaniyad ayaa madaxda Carabta kula talinaya in ay mudan yihiin in ay u gurmadaan walaalahooda Soomaaliyeed maaddaama ay muuqata in arrimahoodii la geliyey gacmo shisheeye oo aan Carab iyo Muslim midna ahayn. Wuxuuna ku soo gabagabeeyey in qaybsigan cusubi uu yahay mid meesha ka saarayo hammigii iyo riyaddii Soomaalaidu ay waligeedba ku taami jirtey taas oo ahayd in Soomaaliweyn ay soo noqoto gacanta cadowgana ka xorowda, laakiin taa waxa beddelay in kuwii ka badbaaday gumaysiga Itoobiya iyo Kenya ay maanta mindidu dulsaaran tahay, una muuqda kuwo la sii kala googoynayo.
Suldaan Maxamed Suldaan Garyare (Abu-Cabduraxmaan).
JAWAARI JIDKEE HAYAA:- Jawaari oo bilad ku helay inow Dad iyo Dal muslim ah Dastuur loo dhiibay ka dhaqan galiyay!
Posted on April 11, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Dubois Sculpture waa Ninka Muuqaalkiisa Sanamkaa uu inta badan Wadamada Galbeedka uu kudhagan yahay goobaha Qareennada, waa Nin Faransiis ah oo Sharciyada u sameeyey Wadamada Yurubta, sidoo kale waxaa Dubbaha isticmaala Wadamada Galbeedka intooda badan gaar ahaan Wadanka Maraykanka.
Wuxuu aad ugu amaanay inow ummada somaliyeed u geeyay dastuurkii loo dhiibay,kaaso ay horey ugu dhiiran waayeen dad isaga ka horeeyay,waxaana la wada cabay Qamro iyo waxyaabo kale oo xun.
Sayid Maxamed Cabdallah Xassan ayaa Magaalada Hargaysa Asaga oo Sacuudiga kayimid, wuxuu la kulmay Wiil yar, Silsilad qoorta ugu xiran tahay, markaas ayuu yiri, Adeer magacaa?, Wiilkii ayaa yiri, John Maxamed, markaas ayaa Sayidkii inta Qoslay yiri, Maxamed John Madhalo!, Sayid Maxamed waa Sheekh Saalixiya wuxuu la yaabay Wiil Aabbe Muslim ah dhalay in uu John labaxo.
Maxamed Cismaan Jawaari, su’aasha ayaa ah Maxamed Nin la yiraahdo oo Dastuur inta ku dhaarta haddana Sharci dajiyo, maku farxi karaa Dubbo la siiyey?. Ilaahay diintiisa maxaa lagu cayaaray!. Magac aan Caqiido saxiixa wadan macno badan samayn maayo.
WARBIXIN:-Idaacad ay ka shaqeyn doonaan Haween Kaliya oo laga furayo Muqdisho.
Posted on April 8, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Magaalada Muqdisho ayaa gashay marxalad ka duwan tii ay ku jirtay xiligii gacanta ku haysay xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Magaalada Muqdisho oo ah Caasimada Soomaaliya waxay la ciirciireysaa qurba joog isaga timid Dunida dacaladeed.
Dadka qurbaha ka yimid kuwa xun iyo kuwa wanaagsan wey leeyihiin.
Shabaabkii waa laga xureeyay Muqdisho waxa ay dhashay in Magaalada lagu dhex arko Haween Gawaari raaxo iyo kuwa BL- ku dhex kaxeeynaya(Subxaanallaah)
Baarlaman la yiri boqolkiiba sodan waa Haween,xukuumad la yiri waxaa wasiirka arimaha dibada u ah Haweenay dhex fadhiisanaya shirarka caalamka ma ahayn wax wanaag laga fili karayay.
Sumcad xumida Soomaalida ku dul habsatay ayaa si weyn caalamka looga dareemay.
Layaab iyo hadal heyn qof aysan ila wadaagin ayay ii ahayd markii aan maqlay wasiirada arimaha dibada Soomaaliya waxay ka qeybgashay shirka wasiirada Dalalka carabta oo idilkood rag ahaa.
Haweenayda Wasiirka Arimaha dibada Soomaaliya ayaa xili saq dhexe la kulmaysa Wasiirka Arimaha Dibada Kenya qarac kale ayay ii ahayd.
Beesha Caalamka xiligii ay dhidibada utaagayeen Dowladda Federaalka waxa ay damacsanaayeen in Wasiirka Koowaad Xukuumada laga dhigo Haweenay laakin Dalal badan ayaa soo jeediyay in marka hore Soomaalida lagu tijaabiyo Ficilka ay ka bixin karaan in Wasiirka Arimaha Dibada laga dhigo Haweenay.
Waan Aqbalnay in Wasiir arime dibadeed laga dhigo haweenay ,waxa harsan waxa weeye in lasoo magacaabo qof haweenay ah oo raisulwasaare ka ah Dalka Soomaaliya.
Idaacadd loogu magac daray Aman radio ayaa dhawaan laga furi doonaa Magaalada Muqdisho gaar ahaan Degmada Howlwadaag,waxaana ka shaqeyn doona gebi ahaanba haween Soomaaliyeed.
Farxiya Faarax Rooble oo ah Agaasime ku xigeenka Idaacaddaan ayaa usheegtay Mareegta ku hadasha Afka Taliska Mareykanka Qaarada Afrika ee Sabahi in arinkaan ay ugu dan leeyihiin in lagu xoojiyo haweenka gaar ahaan dhanka warbaahinta.
bal aynu aragno sida ay ushaqeeyaan
W/Q Injineer Axmed Cali Suuxaaye.